वित्तीय ऋण कहिले निर्धारित हुन्छ? रुचिहरू! ▷➡️ पोस्टपोस्ट | पोस्टपोस्ट
वित्तीय ऋण कहिले निर्धारित हुन्छ? रुचिहरू!
ज्ञानको कुना | | आर्थिक
वित्तीय ऋण विश्वका अधिकांश नागरिकहरूको लागि ठूलो चिन्ताको विषय हो। तर समय मा एक बिन्दु छ जब यो पनि समाप्त हुन्छ। सँगै जाँच गरौं जब ऋण लेख्छ.
1 ऋण कहिले निर्धारित हुन्छ? लामो समयदेखि ऋणीको प्रश्न
2 जान्नको लागि आधारभूत सर्तहरू सही रूपमा ऋण निर्धारण गर्दा?
3 क्रेडिट कार्ड को मामला मा ऋण प्रिस्क्रिप्शन
4 जरिवानाको अवस्थामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
5 भाडाको मामलामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
6 धितोको अवस्थामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
7 सामाजिक सुरक्षा को मामला मा ऋण को प्रिस्क्रिप्शन
8 ट्रेजरी अगाडि डिफल्टको अवस्थामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
9 घरेलु सेवाहरूको मामलामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
10 व्यावसायिक सञ्चालनको मामलामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
11 नगरपालिका दायित्व को मामला मा एक ऋण को प्रिस्क्रिप्शन
ऋण कहिले निर्धारित हुन्छ? लामो समयदेखि ऋणीको प्रश्न
आधुनिक सामाजिक परिदृश्यमा, हामीले सोध्नुलाई केही हदसम्म भोली पनि पाउँछौं ऋण कहिले निर्धारित हुन्छ? हाम्रो अस्तित्व पैसाले यति हदसम्म निर्धारण गरिएको छ कि हामीले हाम्रो जीवनभर विभिन्न उदाहरणहरूमा ऋणी छौं कि यो पहिलो नजरमा हामीलाई केही समय पर्खिएर हाम्रो काँधबाट यो भार हटाउन सक्छ भन्ने भ्रम देखिन्छ।
यद्यपि, विचार गर्न अन्य कारकहरू भए तापनि, यो धेरै केसहरूमा ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ र प्रत्येक नागरिकलाई उनीहरूको मौद्रिक दायित्वहरूको म्याद समाप्त हुने समय बारे सचेत हुनुपर्दछ कि उनीहरूलाई धेरै नोकरशाही पीडा बिना कसरी छुटकारा पाउन सकिन्छ।
ऋणको प्रिस्क्रिप्शन विश्वभरका देशहरूको आधारभूत विधायी कागजातहरूमा राम्रोसँग स्थापित छ। उदाहरणका लागि, स्पेनी नागरिक संहिताको धारा १९६१ ले बताउँछ कार्यहरु कानून द्वारा निर्धारित समय को लागी मात्र निर्धारित गर्दछ.
जसबाट यो पछ्याउँछ कि ऋण कार्यहरू सक्रिय रहन्छ जबसम्म तिनीहरू कानूनी पाठ द्वारा निर्धारित निश्चित अवधि भित्र रहन्छ। यस लेख 1961 लाई पछ्याउने लेखहरूले ऋणको प्रत्येक केस निर्दिष्ट गर्दछ जुन प्रत्येकको लागि तोकिएको अवधिसँग अवस्थित हुन सक्छ। यसरी, प्रत्येक पार्टीले आफ्नो विशिष्ट दायरासँग सम्बन्धित ऋण कसरी परिभाषित गरिएको छ भनेर जान्न सक्ने स्थितिमा छ।
यद्यपि, यो ऋणको प्रिस्क्रिप्शन मूल्याङ्कन गर्दा विचार गर्नु पर्ने समय मात्र होइन। विद्यमान ऋणको सम्बन्धमा ऋणदाता र ऋणीको विशिष्ट कार्यहरूले समयको अन्य विचारहरूलाई बाध्य पार्दै, स्थापित सर्तहरूलाई पूर्ण रूपमा परिमार्जन गर्न सक्छ। हामी यसलाई अर्को हेर्नेछौं।
यदि तपाइँसँग ऋण परिदृश्यहरूमा विशेष चासो छ भने, विशेष गरी ऋण समाधान खोज्ने तरिकाहरूसँग सम्बन्धित सबै कुरा, तपाइँ विवरणहरू र जान्नको लागि सुझावहरूको लागि समर्पित हाम्रो वेबसाइटमा यो अन्य लेख भ्रमण गर्न उपयोगी पाउन सक्नुहुन्छ। कसरी ऋण वार्ता गर्ने.
यहाँ उल्लेख गरिएको म्याद समाप्त हुने अवधि र वार्तामा ऋणदातासँग सँगै समाधानहरू कसरी फेला पार्ने भनेर जान्नु महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। लिङ्क पछ्याउनुहोस्! तपाईं बारे थप जान्न चाहनुहुन्छ भने जब ऋण लेख्छ, यो लेख पढ्न जारी राख्नुहोस्।
जान्नको लागि आधारभूत सर्तहरू सही रूपमा ऋण निर्धारण गर्दा?
हामीले पहिले भनेझैं, वर्तमान ऋणमा आधारित लेनदार र ऋणीका कार्यहरूले उनीहरूसँग सम्बन्धित कानूनद्वारा निर्धारित सर्तहरूलाई निर्णायक रूपमा परिवर्तन गर्न सक्छ। तसर्थ, प्रत्येक ऋण ढाँचाको लागि त्रुटिहरू मूल्याङ्कन गर्नु अघि यी कारकहरू पहिले जाँच गर्न उपयोगी हुन सक्छ।
पहिलो कारक यो हो कि यस अवधिभरि ऋण तिर्नको लागि ऋणदाता द्वारा औपचारिक माग गरिएको छैन। यो आवश्यकता न्यायिक प्रक्रिया अनुसार, मुद्दा मा विशेष अदालत मा, वा गैरन्यायिक रूपमा, ऋणी संग विभिन्न माध्यमहरु द्वारा प्रत्यक्ष संचार वा नोटरी आवश्यकता द्वारा दिन सकिन्छ।
यदि वर्णन गरिएको अनुरोध हुन्छ भने, ऋणदाताले ऋणलाई प्रिस्क्रिप्शनमा लैजाने समयलाई प्रभावकारी रूपमा रोकिरहेको छ, किनकि यसले ऋण अझै जीवित छ भनेर स्पष्ट गरिरहेको छ। अन्यथा, यदि तपाइँ तपाइँको मुद्दाको लागि कानून द्वारा स्थापित अवधि भित्र कुनै माग प्रस्तुत गर्नुहुन्न भने, यसको मतलब यो हो कि ऋणको पूर्ण म्याद नसुन्जेल समय तपाइँ विरुद्ध चलिरहनेछ।
दोस्रो आवश्यक कारक ऋणीले ऋणको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेको छैन। यो स्वीकृति लेनदारसँगको कुनै पनि सञ्चारमा स्पष्ट रूपमा दिइनेछ जुन ऋणदाताले प्रमाणको रूपमा वा स्पष्ट रूपमा उही सञ्चारमा वा औपचारिक अदालत सेटिङमा प्रस्तुत गर्न सक्छ।
तर्क लेनदारको माग कार्यहरूको मामलामा जस्तै हो: यदि ऋणीले तिर्नु पर्ने ऋण छ भनी मान्दछ भने, सीमाको विधान चल्न जारी राख्न सक्दैन, दायित्व बलमा रहन्छ। यसको विपरित, यदि ऋणीले यसलाई बेवास्ता गरे र साहूले भुक्तानीको माग गरेन भने, यो निर्धारित अवधिको पूर्तिसँगै ऋण समाप्तिको बाटोमा रहेको मान्न सकिन्छ। तर यी सर्तहरू प्रत्येक प्रकारको ऋणको लागि फरक छन्। त्यसपछि हामी यी धेरै अवधिहरू कानून द्वारा स्थापित रूपमा देख्छौं।
क्रेडिट कार्ड को मामला मा ऋण प्रिस्क्रिप्शन
हामी क्रेडिट कार्डको मामलाबाट सुरु गर्छौं, सायद कुनै पनि शहरका नागरिकका लागि ऋणको सबैभन्दा सामान्य प्रकार र यसको भ्रामक सरलता र ब्याज दरहरूको कारणले समयसँगै घातक रूपमा विस्तार गर्न सकिने दायित्व। तसर्थ, यो पनि एक ऋण हो जसमा ऋणी द्वारा समाप्ति को लागी अधिक इच्छा हुन सक्छ।
नागरिक संहिताको धारा १९६४.२ मा कानूनले तोकेको न्यूनतम अवधि ऋणको प्रिस्क्रिप्शनको लागि पाँच वर्ष हो। यी पाँच वर्षहरू भुक्तानीको अनुपालनको माग गर्न सम्भव भएको क्षणबाट गणना गर्न सुरु हुन्छ, अर्थात्, ऋणको सन्दर्भमा ऋणको पहिलो परिदृश्यबाट।
अपेक्षित रूपमा, यो सबै अवधिमा भुक्तानीको लागि कुनै माग उत्पादन गर्न बैंकलाई गाह्रो छ। क्रेडिट कार्डको सन्दर्भमा बैंकको दृष्टिकोणबाट अपेक्षित आम्दानी अनिवार्य रूपमा निरन्तर ऋण व्यवस्थापनमा आधारित हुन्छ।
जे होस्, त्यहाँ घटनाहरू छन् जसमा यो यस तरिकाले हुन सक्छ, संस्थाको मर्जर वा बिक्री प्रक्रियाहरूको कारणले गर्दा रेकर्डहरू हराउन वा प्रश्नमा व्यक्तिगत ऋणीको ट्रेस गुमाउने कारणले गर्दा।
जरिवानाको अवस्थामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
जरिवानाले पनि तोकेको छ, यद्यपि यो विभिन्न अवधारणाहरू बीचको निश्चित सूक्ष्मताहरू रूपरेखा गर्न आवश्यक छ। उदाहरणका लागि, एउटा कुरा उल्लङ्घनको म्याद समाप्ति हो, किनभने यो लागू गर्न उपयुक्त निकायहरूले यो निश्चित समयावधिमा गरेनन्, र अर्को कुरा भनेको जरिवानाको प्रिस्क्रिप्शन हो, आर्थिक स्वीकृति जुन तिर्न आवश्यक छ। उल्लङ्घनको लागि दायित्वबाट छुटकारा पाउन।
यदि हामी पहिलो, उल्लङ्घनको म्याद समाप्तिको बारेमा कुरा गर्छौं भने, हामीले ट्राफिक कानूनको सहारा लिनुपर्छ। यस कानुनी पाठमा हामीलाई उल्लङ्घन कत्तिको गम्भीर छ भन्ने आधारमा विभिन्न प्रिस्क्रिप्शन अवधिहरूको बारेमा बताइन्छ, जुन दायरा भित्र थोरै, गम्भीर, धेरै गम्भीरसम्म जान्छ। सबैभन्दा हल्का केसको म्याद समाप्त हुन तीन महिनाको अवधि तोकिएको छ, बशर्ते कि स्वीकृति व्यक्तिलाई कहिल्यै सूचित गरिएको छैन। दोस्रो केस, गम्भीर, छ महिनाको दोहोरो अवधि तोकिएको छ।
र धेरै गम्भीर उल्लङ्घनको अवस्थामा, यो खारेज हुनु अघि छ महिना पनि बित्नु पर्छ। दोस्रो अवस्थामा, जरिवाना तोकिएको क्षणमा, यो मानिन्छ कि चार वर्ष बितेपछि, यो स्वीकृतिको लागि भुक्तानी दाबी गर्न सम्भव छैन।
भाडाको मामलामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
नागरिक संहिताको धारा १६६ ले विशेष गरी घर जग्गा पट्टा खण्ड अन्तर्गत भाडामा लिइएको छ। कानूनले केवल पाँच वर्षको अवधि भनेको भाडामा तिरेको भुक्तानीको म्याद सकिएको छ भनी विचार गर्ने न्यूनतम अवधि हो। यो पाँच वर्षपछि ऋणीले बक्यौता रकम तिर्न आवश्यक पर्ने छैन ।
निस्सन्देह, क्रेडिट कार्ड र बैंकहरूको मामलामा, घर मालिकले भुक्तानी र कानूनी दावीहरू सुरु नगरी पाँच वर्षको भाडाको अवधि पूरा गर्न दुर्लभ छ। यो तिनीहरूको सम्पत्तिको सन्दर्भमा चरम दूरी र लापरवाहीको मामला हुनुपर्दछ, जसले पट्टा ऋण प्रिस्क्रिप्शन ट्रिगर गर्दछ।
धितोको अवस्थामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
¿ऋण कहिले निर्धारित हुन्छ? यदि हामी धितोको बारेमा कुरा गर्छौं भने? यो खण्ड जताततै हजारौं ऋणदाताहरू द्वारा समीक्षा गरिएको छ, किनकि धितो भित्र पूर्वनिर्धारित हुनुको नतिजा सामान्यतया धेरै अप्रिय र विशाल हुन्छ।
घरको पुन: कब्जा र लिलामी कम्तिमा हो जुन ऋणको नतिजाको रूपमा हुन सक्छ र स्थिति सामान्यतया त्यहाँ रोकिँदैन, किनकि धेरै पटक घरको सम्पूर्ण मूल्यले बैंकसँग ऋण पूर्ण रूपमा कभर गर्दैन। त्यसपछि तिनीहरूले धितो तिर्न समाप्त गर्न निक्षेपहरू कार्यान्वयन गर्न जारी राख्नुपर्छ। यो एक महँगो प्रक्रिया हो जुन वर्षौं लाग्न सक्छ।
नागरिक संहिताको धारा 1964 अनुसार, धितो भुक्तानी नगरेको पहिलो क्षणबाट बीस वर्ष पछि समाप्त हुन्छ। तर बैंकले मान्न सकिने गरी कानुनी दाबी कार्यान्वयन गर्न र ऋणमा तिर्नुपर्ने रकम र पर्याप्त ब्याज दुवै उठाउन सामान्यतया तीन महिनाभन्दा बढी कुर्नु पर्दैन।
त्यसपछि बीस वर्ष धेरै अवस्थामा प्रतीकात्मक रूपमा कार्य गर्दछ, तर चरम बैंकिङ अनियमितताका केही अपवादहरूको लागि कार्यात्मक।
सामाजिक सुरक्षा को मामला मा ऋण को प्रिस्क्रिप्शन
सामाजिक सुरक्षा ढाँचाले योगदानको भुक्तानीसँग सम्बन्धित तपाइँको ऋणको सीमा स्थापित गर्दछ: भुक्तानी नगरेको दाबी गर्न सकिने क्षणबाट चार वर्ष। एक पटक यो अवधि समाप्त भएपछि, शुल्क तिर्नको दायित्व रद्द मान्न सकिन्छ, साथै संस्थाद्वारा व्यक्तिलाई प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना पनि छ।
तर त्यहाँ एक विवरण छ कि विचार गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षाको कारण हुन सक्ने सबै भुक्तानीहरू आधारभूत कोटा दायित्वहरूसँग सम्बन्धित छैनन्। त्यहाँ अन्य खण्डहरू छन्, जस्तै विशिष्ट लाभहरूको भुक्तानी, स्व-रोजगार भुक्तानी वा सार्वजनिक निकायबाट विभिन्न पूरक भुक्तानीहरू, जसको आफ्नै भुक्तानी, ऋण र प्रिस्क्रिप्शन अवधिहरू हुनेछन्।
तसर्थ, यी आन्तरिक भिन्नताहरू बारे अत्यन्त सचेत हुन आवश्यक छ, जुन सम्बन्धित कार्यालयहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ।
बैंकहरूसँग धितो वा क्रेडिट कार्ड ऋणको मामलामा, सामाजिक सुरक्षाको लागि म्याद समाप्ति मिति चार वर्ष अघि औपचारिक रूपमा भुक्तानी आवश्यक पर्दैन। कानुनी मागहरूको कारणले गर्दा कुनै अवरोध बिना पूर्ण रूपमा पूरा गर्नको लागि त्यहाँ धेरै दुर्लभ केसहरू हुनुपर्दछ।
ट्रेजरी अगाडि डिफल्टको अवस्थामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
यस मामला मा भन्न को लागी धेरै छैन, यो बाहेक, सामाजिक सुरक्षा परिदृश्य मा, सामान्य कर कानून सामान्यतया एक ऋण को प्रिस्क्रिप्शन को लागी चार वर्ष लगाइन्छ। ट्रेजरी प्रशासनले भुक्तान नगरेको खण्डमा नागरिकलाई दाबी पेश गर्न चार वर्षको अवधि हुनेछ, यदि छैन भने, ऋण रद्द मान्न सकिन्छ। यो चेतावनी दिन आवश्यक छ, बैंकिंग संस्थाहरु वा सामाजिक सुरक्षा संग, ट्रेजरी आफ्नो दावी मा विशेष गरी उग्र र समयनिष्ठ छ, जसको लागि यो चार वर्षको अवधि बित्न दिंदा धेरै समय अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
घरेलु सेवाहरूको मामलामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
मुलुकी संहिताको धारा १९६७ ले घरेलु सेवाको भुक्तानीसँग सम्बन्धित ऋणको प्रिस्क्रिप्शनको लागि तीन वर्षको अवधि तोकेको छ। यी सेवाहरूमा बिजुली, टेलिफोन, ग्यास वा पानी, घरको उचित कार्यका लागि आधारभूत सेवाहरू समावेश छन्। सबैलाई थाहा छ, यी सामान्यतया वार्षिक वा मासिक भुक्तानीको आधारमा व्यवस्थित हुन्छन्, तर कुनै पनि अवस्थामा ऋण रद्द गर्न तीन वर्षको अवधि कायम राखिएको छ।
निस्सन्देह, उल्लेख गरिएका अन्य केसहरूमा जस्तै, सेवा प्रदान गर्न जिम्मेवार कम्पनीहरूबाट ऋणको सूचना प्राप्त गर्दा स्वचालित रूपमा तीन वर्षको अवधिमा अवरोध हुन्छ। तर यस क्षेत्रमा विशेषगरी एडीएसएलद्वारा बिजुली वा इन्टरनेट जडानको कुरा गर्ने हो भने तीन वर्षको कार्यकाल पूरा हुने ऋणको व्यवस्था दिनको क्रम हो।
यी सेवाहरूसँग सम्बद्ध कम्पनीहरूले लामो समयदेखि प्रयोगकर्ताहरूको एक प्रतिशतले बारहमासी ऋणको निश्चित स्तरमा राजीनामा दिएका छन्, व्यावहारिक रूपमा यी रातो नम्बरहरू तिनीहरूको ब्यालेन्स पानामा सम्मिलित गर्दै।
व्यावसायिक सञ्चालनको मामलामा ऋणको प्रिस्क्रिप्शन
यस प्रकारको ऋण व्यक्तिहरूको सट्टा सम्पूर्ण कम्पनीहरूसँग मेल खान्छ, जस्तै अघिल्लो उदाहरणहरूमा भएको थियो। यी साझा परियोजनाहरूमा संयुक्त आन्दोलनको समयमा कम्पनीहरू बीच अनुबंधित ऋणहरू हुन्। कानूनी संस्थाहरू बीच यी ऋणहरूको प्रिस्क्रिप्शनको लागि अवधि सामान्यतया पन्ध्र वर्षको अवधिमा अवस्थित हुन्छ। यो पन्ध्र वर्ष पछि, कम्पनीहरु बीच यो ऋण सम्बन्ध विच्छेद हुनेछ।
सायद अचम्मको कुरा, पछिको प्रिस्क्रिप्शनको साथ यो शब्दको अनुपालन यस क्षेत्रमा धेरै सामान्य छ, विशेष गरी यदि कम्पनीहरू साना छन् र ऋण पनि सानो छन्। यो ठूला निगमहरूसँग विश्वव्यापी परिमाणको व्यावसायिक सञ्चालन हुनुपर्दछ कि समयसीमा अघि औपचारिक दाबी छ भनी सुनिश्चित गर्न, रद्द गर्ने घडी रोक्दै।
नगरपालिका दायित्व को मामला मा एक ऋण को प्रिस्क्रिप्शन
ऋण कहिले निर्धारित हुन्छ? नगरपालिका, यसले सामान्यतया तपाईंको इलाकाको सिटी काउन्सिलद्वारा व्यवस्थित कर भुक्तानीहरूलाई जनाउँछ। यद्यपि नगरपालिका कर भुक्तानीहरू धेरै र विविध छन्, असंख्य परिवर्णी शब्दहरू, म्याद समाप्ति मितिहरू र नामहरू सहित, औसत नागरिक द्वारा नामित दुई र सबैभन्दा सामान्य IC (सर्कुलेशन कर) र IBI (रियल इस्टेट कर) हो। - तिनीहरूको सम्प्रदायहरूमा व्याख्यात्मक: सवारी साधनको आवागमन र व्यक्तिगत आवासमा भुक्तानी।
दुबै अवस्थामा, ऋणको प्रिस्क्रिप्शनमा पुग्न कभर गर्ने अवधि चार वर्ष हो। यी चार वर्षहरू भुक्तानी अवधि समाप्त भएको क्षणबाट गणना गरिन्छ, अर्थात्, अन्तिम योगदान जम्मा भएको बिन्दुबाट।
जसको मतलब यो हो कि नगर परिषद्को संस्थासँग यी वर्षहरूमा जम्मा भएको सबै ब्याजसहित भुक्तान नगरेको कभरेज दाबी गर्न चार वर्षको अवधि छ। सर्कुलेशन करको हकमा अब सक्रिय नभएका सवारी साधनका मालिकले नगरपालिकासमक्ष कर तिर्नु पर्दैन भन्ने स्मरण गर्नुपर्छ ।
हामीले अन्वेषण गरेका अन्य क्षेत्रहरूमा जस्तै, यो भन्न सकिन्छ कि कर भुक्तानी सम्बन्धी सबै कुराहरू सामान्यतया नगर परिषद्का कार्यालयहरूले ठूलो चासोका साथ व्यवहार गर्छन्, उच्च स्तरको प्रतिबन्धहरूलाई ध्यानमा राख्दै, जसमा तिनीहरू केही सम्भावित छुटहरूबाट पर्दाफास हुन्छन्। तसर्थ, उनीहरूबाट भुक्तानीको माग सुनुवाइ नगरी चार वर्षको अवधि कुर्न गाह्रो छ।
यससँगै ऋणको प्रिस्क्रिप्शनको लागि प्रत्येक केसमा आवश्यक अवधिको ठूलो अंश समेटिएको छ। निम्न भिडियोमा तपाईले स्पेनी क्षेत्रको वैधता भित्र ऋणको प्रिस्क्रिप्शनको बारेमा संक्षिप्त प्रदर्शनी देख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो लेख जब ऋण लेख्छ देशका विभिन्न वित्तीय क्षेत्रमा। तपाईलाई चाँडै भेट्नुहोस् र तपाईको भुक्तानी, प्रक्रिया र अध्ययनमा शुभकामना।
लेखको पूर्ण मार्ग: पोस्टपोस्ट » आर्थिक » वित्तीय ऋण कहिले निर्धारित हुन्छ? रुचिहरू!
उद्यमीहरूको लागि ऋण, तिनीहरू के समावेश छन्?
ऋण पुनर्वित्त, यो के हो र यसमा के समावेश छ?